I-Yale ibonelela ngezifundo zasimahla kwi-Intanethi zabafundi kunye neengcali kwaye eli nqaku libonelela ngeenkcukacha ezipheleleyo kwezi zifundo kunye nezakhono oza kuzifumana xa ugqiba ikhosi.
Iikhosi ezikwi-Intanethi zithathe indawo yezikolo eziqhelekileyo ngenxa yesifo. Yonke imibulelo kwi-intanethi nakwizixhobo zedijithali onokuzifunda kwi-intanethi kwaye zixhotyiswe ngezakhono ezifanayo kunye nolwazi oluza kukubonelelwa liziko eliqhelekileyo.
Ezi zifundo zasimahla zeYale kwi-Intanethi zisingathwa ziingcali kwicandelo lokufunda. Ezi zifundo zisimahla ukufaka isicelo kunye nokufunda, ngenxa yoko ayifuni naluphi na uhlobo lwentlawulo konke oku kufuna ixesha lakho, ukuzinikela, unxibelelwano lwe-intanethi, kunye nesixhobo esiya kuba sikhululekile ekufundeni kwakho; mhlawumbi ilaptop, ikhompyuter, okanye i-smartphone.
Ukufunda nge-Intanethi kunezibonelelo zayo ngakumbi kula maxesha akutshanje obhubhane oluqhubekayo lwehlabathi, kubalulekile ukuba uqhubeke ufunda izinto ezintsha, uqhubeke nokuphucula izakhono zakho, ufunde ezintsha, ufumane ulwazi olutsha okanye olongezelelweyo kwicandelo lokufunda elahlukileyo, kwaye kuba hayi ukufumana ulwazi kuyachithwa ngokuqinisekileyo kuya kuza kuluncedo ngenye imini.
I-Yale yiyunivesithi eyaziwayo, eyaziwayo kwihlabathi liphela, ivelise abona bantu babalaseleyo, kwaye yenze igalelo elikhulu kwihlabathi ngemfundo esemgangathweni ebisenziwa liziko ukusukela nge1701.
Malunga neYunivesithi yaseYale
Izifundo zasimahla zeYale kwi-Intanethi
1. Imida yoBunjineli beBiomedical
2. IiMarike zeMali
3. Ithiyori yezeMali
4. Ezopolitiko nokusingqongileyo
5. Impucuko yaseYurophu
6. Intshayelelo kwimbali yamandulo yamaGrike
7. Iziseko zokuziphatha kwezopolitiko
8. Izinto ezisisiseko zeFizikiki
9. Intshayelelo yoMculo weClassical
10. Isiseko seTheyori yeNtlalontle yale mihla
11. Ithiyori yoMdlalo
12. Intshayelelo kwiPsychology
13. Isohlwayo senkunzi: ubuhlanga, intlupheko nokungancedi
14. Intshayelelo yethiyori yoncwadi
15. Umntu omtsha weOrganic Chemistry 1
Isiphelo kwiikhosi zeYale zasimahla kwi-Intanethi
Yunivesithi yaseYale Yiyunivesithi yabucala yophando ye-Ivy League ebekwe eNew Haven, eConnecticut, e-USA kwaye liziko lesithathu elidala lemfundo ephezulu e-US kwaye, ewe, ibekwe njengenye ye-US kunye neeyunivesithi eziphambili zehlabathi.
IYunivesithi yaseYale ibandakanya abantu kunye namaziko kwihlabathi liphela kwimfuno yokukhuthaza ukuqonda kwenkcubeko, ukuphucula iimeko zoluntu, ukuphonononga nzulu kwiimfihlelo zendalo iphela kunye nokuqeqesha isizukulwana esilandelayo seenkokheli zehlabathi.
Ukusukela oko yasekwa ukuza kuthi ga ngoku, i-Yale izinikezele ekwandiseni nasekwabelaneni ngolwazi, ukukhuthaza izinto ezintsha, kunye nokugcina ulwazi lwenkcubeko kunye nolwenzululwazi kwizizukulwana ezizayo.
Nangona kunjalo, umnqweno wokwandisa kunye nokwabelana ngolwazi awukanciphi kwaye ukukhanya kwezinto ezintsha kusakhanya ngokuqaqambileyo kude kube namhlanje, yiyo loo nto iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezivulelekileyo kuwo wonke umntu kwihlabathi jikelele ukuba zifake kwaye zifumane ulwazi kunye nezakhono zokhetho lwabo.
Iikhosi zasimahla kwi-Intanethi zibandakanya iintetho kunye nezinye izinto ezivela kwizifundo ezikhethiweyo zeKholeji zaseYale ezinikezelwa kuluntu simahla kwi-intanethi. Iikhosi zithatha uluhlu olupheleleyo lweenkalo zobugcisa be-liberal, ezoluntu, ezenzululwazi yomzimba, iinzululwazi zebhayoloji, kunye nesayensi yezentlalo eyilelwe ngokufanelekileyo ukulunga lonke uhlobo lomfundi.
Sele sibhale kwezinye ezona zifundo zibalaseleyo zaseCanada kwi-Intanethi kunye nenani le Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi eziprintwayo ivulekele abafundi abavela kwihlabathi liphela.
Ukulandela inyani yokuba abafundi bakhetha iikhosi ezikwi-Intanethi ezisebenzayo, sabhala kwezinye izifundo zekhompyuter kwi-intanethi ezinezatifikethi ezifundisa izakhono ezisebenzisekayo zedijithali ezinokuthi zithathe inxaxheba kubafundi nakwiingcali.
Ngaphandle kokuqhubeka, ndiza kudwelisa ezi zifundo.
Imida yobunjineli boBunjineli
Ezopolitiko Kwezendalo kunye noMthetho
Ukwazisa ngembali yakudala yamaGrike
Iziseko zokuziphatha kwezopolitiko
Izinto ezisisiseko zeFizikiki
Intshayelelo yoMculo weClassical
Isiseko seTheory yaNgoku yoLuntu
Isohlwayo senkunzi: ubuhlanga, intlupheko kunye nokungancedi
Intshayelelo kwiTheyori yoncwadi
Umntu oMtsha weChemistry
Emva kophando olunzulu, ndaye ndeza nezifundo zasimahla ze-15 zaseYale eziqinisekileyo zokukhulisa umdla wakho kwaye ukhethe kuwo.
Le khosi yasimahla ye-Yale ekwi-Intanethi, Imida yoBunjineli beBiomedical, igubungela iikhonsepthi ezisisiseko zobunjineli bendalo kunye nokunxibelelana kwabo nembonakalo yemisebenzi yabantu. Le khosi yenzelwe i-science kunye ne-non-science majors kwaye ibandakanya uphando lweziyobisi kunye neemveliso zonyango, ukukhuselwa kwelungelo elilodwa lomenzi kunye nokuvunywa kwe-FDA.
Ukugqiba le khosi kuya kukuvulela amathuba kwicandelo lezonyango nokuba lelikarhulumente okanye labucala.
Ikhosi yasimahla ekwi-Yale ekwi-Intanethi, kwiMarike zezeMali, inika abafundi ukuqonda kwethiyori yezemali kunye nendlela edibana ngayo nembali, amandla kunye nokungafezeki kweziko elifana nokubhankisha, ukhuseleko, ikamva, i-inshurensi, kunye nezinye iimarike ezivela kwezinye, kunye nekamva lezi amaziko kwikhulu elizayo.
Uya kufumana ulwazi malunga nendlela intengiso yemali kunye namaziko ahambelana nayo asebenza ngayo kunye nembali yentengiso yezemali.
Ikhosi yasimahla ekwi-Intanethi yeYale, ithiyori yeMali, izama ukucacisa indima kunye nokubaluleka kwenkqubo yezemali kuqoqosho lwehlabathi kwaye ikwanika nengcaciso ngohlobo lokucinga nohlalutyo olwenziwe ziihedge fund.
Le khosi yasimahla ye-Yale ekwi-Intanethi, ezopolitiko kwimo yendalo esingqongileyo kunye nomthetho, abafundi baya kuphonononga ubume bezomthetho kwaye bavavanye ukufaneleka kunye neempawu zazo ezimbi. Umthetho uza kuqwalaselwa ngembali yamatyala anje ngemiphumela yokusingqongileyo kukhuseleko lwesizwe, iimveliso zabathengi, izibulala-zinambuzane, ukukhula kwedolophu kunye nokwanda, ukusetyenziswa komhlaba, ulawulo lwendawo, ukuhamba kwabantu / abucala, ukhuseleko lokutya phakathi kwabanye.
Ikhosi yasimahla yaseYale, Impucuko yaseYurophu, ibonelela ngovavanyo olubanzi lwembali yanamhlanje yaseYurophu, ukusukela esiphelweni seminyaka engamashumi amathathu yemfazwe ukuya emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Ezinye iziganeko eziphambili zembali kunye namanani aya kuqwalaselwa ngokulinganayo ngexesha lokufunda.
Le khosi iya kukunika ukuqonda kwimbali yaseMelika neyaseYurophu, ukuba ezinye izinto zibekho njani, kunye nenkcubeko yomntu ngokubanzi.
Inkqubo yasimahla ye-Yale ekwi-Intanethi, intshayelelo kwimbali yamandulo yamaGrike, iphonononga ukukhula kwempucuko yamaGrike njengoko ibonakalisiwe kwezopolitiko, kwezobukrelekrele kunye nakwimpumelelo yoyilo ukusuka kwiBronze Age ukuya esiphelweni sexesha lakudala. Abafundi baya kufunda imithombo yoqobo kuguqulelo kunye nemisebenzi yabaphengululi banamhlanje.
Le khosi iya kukunika ukuqonda okungcono kwamaGrike kunye nembali yawo kunye nefuthe lawo emhlabeni
Ingaba kufanelekile nini ukuba sithembeke kurhulumente? Ikhosi yasimahla ekwi-Intanethi ekwi-Yale, iZiseko zokuziphatha kwezopolitiko, iphonononga iimpendulo eziphambili kulo mbuzo kwaye iqala ngophando lweenkcazo eziphambili zezopolitiko zoKhanyiso ngohlobo lweklasikhi, imeko yezembali, kunye neengxoxo zangoku ezinxulumene nezopolitiko namhlanje.
Uya kuziqonda isimilo ezakhiwa kuso ezopolitiko, imbali yayo, kunye nefuthe lokuziphatha kwezopolitiko.
Le khosi yasimahla ye-Yale ekwi-intanethi yabafundi kunye neengcali, iZiseko zeFizikiki, ibonelela ngentshayelelo epheleleyo kwimigaqo kunye neendlela zefizikiki. Le khosi igubungela ubuchwephetsha baseNewtonia, ulwalamano olukhethekileyo, ithermodynamics kunye namaza.
Abafundi baya kufumana ukuqonda okupheleleyo kwe-physics esisiseko kubandakanya ukusombulula iingxaki kunye nokuqiqa ngobungakanani.
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi yiYunivesithi yaseYale, ingenisa abafundi kwihlabathi lomculo weklasikhi kunye nemisebenzi yabanye amagcisa abalulekileyo banegalelo kubugcisa bomculo weklasiki.
Abafundi bafumana ulwazi ngomculo weklasikhi, ukusuka kwi-Bach fugues ukuya kwii-symphony zeMozart ukuya kwii-Puccini opera, kwaye bayayazi indlela yokuwachonga.
Le yenye yezona zifundo zidumileyo kwi-intanethi kwizifundo ezenziwa kwi-intanethi namhlanje. Le khosi ibonelelwa nge-Intanethi simahla yiYunivesithi yaseYale kwaye ibonelela abafundi ngesishwankathelo semisebenzi ephambili yeengcinga zentlalo kwasekuqaleni kwexesha langoku ngee-1920s. Ingqwalaselo ihlawulwa kwimeko yezentlalo kunye neyengqondo, izikhokelo zendlela kunye neendlela, kunye negalelo kuhlalutyo lwentlalo lwangoku.
Ikhosi yasimahla ekwi-Yale ekwi-intanethi yabafundi kunye neengcali, iTheyori yoMdlalo, yazisa umfundi ukuba yeyiphi na ithiyori yomdlalo kunye nokucinga ngobuchule. Izimvo ezinje ngolawulo, ukubuyela umva ngomlinganiso, ulingano lweNash, uzinzo kwindaleko, ukuzibophelela kuyasetyenziswa kwimidlalo edlalwa eklasini kunye nemizekelo ethathwe kwezopolitiko, ezoqoqosho nakwimiboniso bhanyabhanya.
Abafundi bafumana iingcinga zokucinga malunga nokuba bazisebenzisa njani kwaye bazisebenzisa njani ezi zimvo.
Ikhosi yasimahla ekwi-Yale ekwi-intanethi yabafundi kunye neengcali, iNtshayelelo kwiPsychology, yazisa abafundi kwiziseko zengqondo kunye nokuphendula imibuzo esisiseko yengqondo ikwabonelela ngesishwankathelo esibanzi sophando lwenzululwazi lokucinga nokuziphatha.
Abafundi baya kufumana ukuqonda malunga nengqondo yamaphupha, indlala, uthando, ukuthatha izigqibo, inkolo, ubugcisa, inkanuko, intsomi, inkumbulo kunye nendlela ezi zinto ezichaphazela ngayo ukukhula kwenqanaba labantu.
Ikhosi yasimahla ekwi-Yale ekwi-Intanethi, isohlwayo seNkunzi: ubuhlanga, intlupheko kunye nokungancedi, iphonononga imiba yendlala kunye nobuhlanga kwinkqubo yezobulungisa kulwaphulo-mthetho, ngakumbi ngokubhekisele kwisigwebo sentambo.
Abafundi baya kufumana ulwazi kwilungelo lokufumana iingcebiso kubantu abangenakho ukuhlawulela amagqwetha, ucalucalulo ngokobuhlanga, ukuqonda komtshutshisi, inkululeko yezomthetho kunye nemicimbi yezempilo yengqondo.
Ikhosi yasimahla ekwi-Yale ekwi-Intanethi, Intshayelelo kwiTheyori yoNcwadi, luvavanyo lweyona nto iphambili kwithiyori yenkulungwane yamashumi amabini kwaye isifundo sibonelela ngemvelaphi yokufunda kwaye sichaze apho kufanelekileyo.
Uya kufunda ukuba luyintoni na uncwadi, ukuba ungaluqonda njani kwaye yintoni injongo yalo.
Le khosi ibonelelwa nge-Intanethi simahla yiYunivesithi yaseYale ijolise kwiithiyori zangoku zesakhiwo kunye nendlela yokusebenza kwi-organic chemistry, ukukhula kwabo kwimbali kunye nesiseko sabo ekuqwalaselweni kovavanyo.
Uya kuzuza izakhono zobukrelekrele eziyimfuneko kuphando loyilo kunye nokuphuhlisa incasa yesayensi yoqobo.
Kulapho unoluhlu olupheleleyo, eneenkcukacha ezipheleleyo, kwiikhosi ze-15 zasimahla zeYale ezikwi-Intanethi zabafundi kunye neengcali eziyimfuneko ukwandisa ulwazi lwakho.
Iikhosi zasimahla ze-Yale ze-Intanethi ziyilelwe kakuhle kwaye zinonxibelelwano oluhle lomsebenzisi nakubani na, nokuba lixesha lokuqala, ukuqonda ngokulula umxholo kwaye inezinye izinto ezimiselwe inkqubo yokufunda enjengokukhuphela, ukwabelana, kunye nokuxuba izixhobo zekhosi.
Uninzi lwezifundo zenziwa ngokuvulekileyo kwi-youtube kwaye zidityanisiwe kunye zisebenzisa uluhlu lwadlalwayo lwe-youtube ukwenza zonke iikhosi kwicandelo zifikeleleke ngokulula endaweni.
Ezinye zeekhosi zinikezelwa kwiqonga leCoursera elibonakaliswe njengenye ye Amaqonga okufunda akwi-Intanethi kwihlabathi jikelele namhlanje.
Ukubonisa ukuba awufumananga zifundo zinomdla kolu luhlu lwezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi nguYale, ungajonga malunga ne-50 eyahlukileyo iikhosi zasimahla kwi-Intanethi zeYunivesithi yaseHarvard egubungela iinkalo ezininzi zokufunda.
Kukho malunga nama-22 ahlukeneyo simahla kwaye ihlawulwe iikhosi ezikwi-Intanethi yiYunivesithi yaseToronto eCanada esidwelise kunye neekhonkco zabo zesicelo onokuthi ujonge kuzo.
Kwezi zifundo zikwi-Intanethi zeYale, ikhosi nganye ibandakanya iseti epheleleyo yezifundo zeklasi eziveliswe kwiividiyo ezikumgangatho ophezulu ezihamba nezinye izinto ezinje ngesilabhasi, ukufundwa okucetyiswayo kunye neeseti zengxaki. Iintetho ziyafumaneka ukhuphelo lwevidiyo kwaye zinenguqulo yeaudiyo kuphela.
iikhosi zasimahla kwi-Intanethi ngeyunivesithi yaseYaleIzifundo zasimahla zeYale kwi-IntanethiIikhosi ze-Yale zasimahla kwi-Intanethi zaBafundi kunye nabaFundiyale kwi-intanethiIikhosi zaseyunivesithi ezikwi-Intanethi
Post Previous:Izikolo ze-12 zeZikolo eziBalaseleyo kwiLizwe ngeeScholarships
Okulandelayo Post:IYunivesithi yaseCalgary Iimfuneko | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Pingback: I-9 yeeDigri eziPhezulu zeNkonzo eziSimahla kwi-Intanethi kunye neeDigri zeSemina 2022
Pingback: Izikolo ezingama-30 eziBalaseleyo zezoBunjineli zeBiomedical 2021